ဘဝမှတ်တိုင်: Android ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလေးလင်းပြီး Alam ပြပေးမယ့် "Flash Blink On Call" ဆိုတဲ့ Apk လေး
Android ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလေးလင်းပြီး Alam ပြပေးမယ့် "Flash Blink On Call" ဆိုတဲ့ Apk လေး
Android ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလေးလင်းပြီး Alam ပြပေးမယ့် "Flash Blink On Call" ဆိုတဲ့ Apk လေး တစ်ခုဖြစ်
ပါတယ်။Flash Led ရော Ringtone ပါယှဉ်တွဲသုံးနိုင်ပြီး Flash Only လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Apk File Size1.5MB လောက်ရှိပြီး Android Version 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများ
မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
★ဒီ လင့်ခ် ကိုနှိပ်၍ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ★
ပါဝင်တဲ့ features တွေကတော့•••••••••••••••
Flash Blink On Call application is blinking your mobile back light on incoming call and text sms . it's mostly used in silent Jone and in office . in this apps also used as simply flash light and LED light .
=> Flash Alert on Call
=> Flash Alert on Text Message
=> used as Flash light
=> used As Party LED lights
=> you can set up blinking with ON/OFF from application
=> set flash interval and flash Duration on call and Message .
=> Flash Blink On sms , Flash Alerts , Flash Blink , Flash Notification , Flash on SMS , Flashlight Alerts , Flash Light , Torch Light , LED Light , Flashlight Message Alert
ပေးထားသော လင့်ခ် အား click နှိပ်ပေးပြီးTag နောက်တမျက်နှာသို့ရောက်လျှင် ၅စက္ကန့်မျှစောင့်ကာ ညာဘက်အပေါ်ထိပ်နားကပေါ်လာတဲ့
"SKIP AD"ဆိုတာကို ထပ်မံ၍ click နှိပ်ပေးလိုက်ပါက မိမိဒေါင်းလုပ်ရယူရမည့် ဆိုဒ် သို့ရောက်ရှိပါမည်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/27/2013 04:06:00 am